Yako forum: Martin Vrijland
Kuti uenderere mberi nekuverenga ichi chinyorwa kana kutora chikamu mukukurukurirana maforamu, iwe unogona kuve nhengo nekudzvanya pane iro 'rako tsigiro' bhatani. Izvi zvichakupa iwe kuwana kune yakasara yeichi chinyorwa uye foramu uye kutora chikamu mukurwira nyika iri nani. Iwe unogona ikozvino kutora chikamu pakarepo. Iwe watove nhengo kubva € 2 / mwedzi uye saka nditsigire kuti ndirambe ndichirwira rusununguko rwako.
Kushanya kwakazara: 2.607.389
ongorora op Donald Trump anoridza rudimbwa apo Roma ichipisa, senge Emperor Nero
Martin Vrijland op Donald Trump anoridza rudimbwa apo Roma ichipisa, senge Emperor Nero